Atụmanya nke Mining na 2018 - Blockchain News
Na anya cryptocurrency ibu, ina Ngwuputa ngwá amụbawo nakwa. A afọ ole na ole gara aga onye ọ bụla nwere ohere ezu ike kọmputa nwere ike ibu a na-egwuputa, mgbe afo gara-aga ọnọdụ gbanwere nke ukwuu na gara aga ụzọ nke Ngwuputa tinyeworị adighi ike. Anyị buru amụma ihe Ngwuputa na ọnọdụ ga-abụ ihe kasị ewu ewu na 2018.
Graphics kaadị maka Ngwuputa
Taa nnọọ oké ọnụ akụrụngwa dị mkpa n'ihi na Ngwuputa, ọ kachasị, ndịna kaadị. Ikpeazụ June Chinese online trading n'elu ikpo okwu AliExpress kọrọ na ya ọrụ malite ịchọ ihe ifịk ifịk n'ihi na ụfọdụ ụdị nke ndịna kaadị ndị kacha adabara eke Ngwuputa ugbo. The kasị ewu ewu na ụdị n'etiti Russian miners bụ Nvidia ndịna kaadị-GeForce GTX 1060 na GTX 1070, nakwa dị ka Radeon RX480, arụpụtara site Advanced Micro Devices (AMD).
Ndị a ụdị ịbụ na-ewu ewu ọ bụghị naanị otu Russian miners, gara aga afọ akara AMD si mbak ebili site 64%, mgbe uru nke Nvidia Corporation ala nweela fọrọ nke nta 88% kemgbe mmalite nke 2017. Ọkachamara na-ekwu na ibu na-ekewet ọnụ ọgụgụ ka elu nke miners nke na Ethereum netwọk na ndị ọzọ na-ewu ewu cryptocurrencies. Nvidia bipụtara data na-egosi 6.7% nke revenue n'ihi na nke abụọ nkeji iri na ise nke 2017 natara site ndịna kaadị sales, nke e ji mee ihe maka kaadị Ngwuputa. Ọ bụ ya mere ndị a abụọ na ụlọ ọrụ na Asus ụlọ ọrụ maliteworị inye pụrụ iche ndịna kaadị e maka cryptocurrency Ngwuputa. Ọzọkwa, ikpeazụ n'oge okpomọkụ na anyị maara na AMD na-arụ ọrụ na 7nm 48 isi processor na-akpọ Starship na a ga-atọhapụ na 2018.
ọkachamara, Otú ọ dị, adọ aka ná ntị na Ngwuputa ngwá emepụta na-achọ maka ha na ngwaahịa a na-aga ịda mbà. Dị ka Joseph Moore, onye na nyocha na American akụ na-ejide ụlọ ọrụ Morgan Stanley, Ngwuputa nwere ike ịghọ ihe na aku na uba na-abaghị uru ọrụ 2018.
“Anyị kweere na ngụkọta ndịna ahịa maka ethereum Ngwuputa na 2017 ga- $800 nde ma ọ bụ otú, na ga iju site 50% na 2018.”
Na Moore chere, mbụ kpatara nke a Ụwa bụ a kpara ojuju na n'ozuzu ngọngọ ụgwọ ọrụ na ethereum netwọk si 5 ETH ka 3 ETH. Nke abụọ bụ mgbanwe site Gosiri nke Oru (PoW) na Gosiri nke Eto (naa) mgbe kama Ngwuputa ike, gbasara nke puru omume na-eke a ngọngọ na-anata ndị metụtara ụgwọ ọrụ bụ proportional ka a onye ọrụ nwe eto na usoro. Vijay Rakesh, onye na nyocha nke Japanese ego akụ Mizuho, banyere nke a ọchịchọ kwa. Ọ bụ n'aka na akpa ọkara nke 2018, ndịna kaadị ga-agakwaghị adị mkpa maka cryptocurrency Ngwuputa dị ka ether Ngwuputa.
“Anyị kweere na ethereum anya ịkwaga a dị iche iche ugwo nkwenye usoro na ọnwa isii ọzọ, si Gosiri-of-Work na ojiji nke ndịna kaadị Gosiri-nke-Eto ebe ndịna kaadị abụkwaghị mkpa.”
Ngo nke modifying otutu mmadu kwenyere protocol nke Ethereum netwọk na-akpọ Casper. Ọ na-egosi na ha pụrụ iche na kọmputa na ngwá na-adịghị mkpa ọzọ ike ọhụrụ ngọngọ; kama, ọrụ ga-enwe ike inye ha onwe ha ego na a ga-oyi kpọnwụrụ n'ihi na a mgbe, na na nloghachi, ha ga-enwe ohere iso na-azụmahịa nkwenye. N'ihi ya, Casper ga-ike a usoro na ike guzogide Ngwuputa centralization. Ozugbo esote ndụdụ Constantinople, nke nwere ike ime ná mmalite nke 2018, na-ewe ebe, na Ethereum network update ga-arụ ọrụ.
N'agbanyeghị nwere mgbanwe otutu mmadu kwenyere protocol nke Ethereum netwọk, isi nke Nvidia, Juan Zhjensjun, bụ n'aka na revenue mere si GPU (ndịna-emeputa nhazi unit) ahịa n'ihi na kaadị Ngwuputa ga-anọgide, ekwusi ike na cryptocurrencies na blockchain bụ “ebe a na-anọ.”
“Nke a bụ a ahịa na-adịghị yiri ka pụọ ​​obula anya, na naanị ihe na anyị nwere ike ịbụ na-atụ anya bụ na e nwere ga-abụ ihe ego na-abịa. Ọ ga-abịa na a dum ọtụtụ nke mba dị iche iche. Ọ ga-iputa site n'oge ruo n'oge, na GPU bụ n'ezie nnọọ ukwuu n'ihi na ya.”
ASIC (Ngwa-Specific Integrated Circuit) nke na-adị n'ụdị ibe e kere maka irè Ngwuputa nakwa. ASICs na-eji a kpọmkwem na ngwaọrụ na-ebu nditịm ejedebeghị ọrụ, nke na-eme ogbugbu nke ọrụ ndị a dị ọnụ ala karịa na ngwa ngwa. The ibe ọzọ dị ike na-ewe ọtụtụ obere ume; ha ọtụtụ ugboro ọzọ uru karịa ndịna kaadị. Ọzọkwa, Ngwuputa ugbo-achọ ihe oge na-emefu na nzukọ na ẹkụre, mgbe na ASIC-miners na ị na-niile ka.
N'afọ a, a nọ na-ekpughe na ụlọ ọrụ, dị ka Samsung, Intel, TSMC, na Global Foundries, na-na-emepe emepe 7nm ibe maka ASIC Ngwuputa. Ibe mmepụta na ndokwa maka mbụ nkeji iri na ise nke 2018. Ha ga-enwe mma ume arụmọrụ tụnyere gara aga 14nm ibe.
Japanese Internet ibu GMO ezube ẹkedori a ọhụrụ ASIC-egwuputa na a ga-dabere na 7nm ibe. Mass ibe mmepụta na a technology na-zubere maka May 2018. Next afọ GMO ga ẹkedori ICO na-ere ọzọ-ọgbọ Ngwuputa mbadamba. Ha ga-N'ỤLỌ NCHE tokens dị ka usoro ịzụta ọzọ-ọgbọ Ngwuputa mbadamba. E wezụga, ụlọ ọrụ na-ezube na-ewu Ngwuputa center na Northern Europe:
“Anyị ga na-arụ ọrụ a na-esote-emana Ngwuputa center tinye n'ọrụ ogbara ohuru na ọnwụ onu okporo ọkụ ibe ke Northern Europe. Anyị ga-eji ọnwụ onu 7nm usoro technology maka ibe na-eji na Ngwuputa usoro, na jikotara aka wee na-arụ ọrụ na ya nnyocha na mmepe na n'ichepụta na anyị mmekorita onye na-enwe okporo ọkụ imewe technology.”
ikpeazụ September, Russian egwuputa Mkpụrụ ego (RMC) mụụrụ ICO na-akwado mmepụta nke a ọhụrụ na-egwuputa Ọwụwa na Bitfury ibe na ịzụlite ọzọ ọhụrụ na-egwuputa Multiclet na otu mgbawa. The ICO anakọtara $43.2 nde. RMC agụnye 15 ọchụ nta ego na cryptocurrency oru na-eme anọ ụlọ ọrụ, tinyere MultiClet, SMARTHEAT, GOODWIN, na RadiusGroup. The ụlọ ọrụ malitere egwuputa Ọwụwa mmepụta na, site n'oge okpomọkụ ọzọ, ezube ịzụlite a ọzọ-ọgbọ processor Multiclet, nke ga-abụ 35 ugboro ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma n'ihi na Ngwuputa.
O doro anya na ike na oké ọnụ akụrụngwa, nke a na-nnọọ ike na-ewe oke, dị mkpa n'ihi na ihe ịga nke ọma na Ngwuputa. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ mepụtara ihe ọzọ ụdị nke na Ngwuputa, akpọ ígwé ojii na Ngwuputa. Companies na ike data emmepe enye ngwá, na mgbazinye ego ha ikpeazụ n'ji. Ozugbo nkwekọrịta na-kwubiri na ọrụ na-akwụ ụgwọ, ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Hashflare, Genesis Mining na IQMining ohere Ngwuputa nke ọtụtụ cryptocurrencies.
Ọrụ ndị a na-ama trendy. Ọ dịghị ihe mere ikwere na a na-emekarị ga-akwụsịlata na 2018, dị ka ígwé ojii na Ngwuputa bụ ihe oké ọnụ, pụrụ ịdabere na, na-adaba adaba ụzọ cryptocurrency, nke na-adịghị achọ ka ọ bụla dị oké ọnụ akụrụngwa. E nwere ụfọdụ ndị o kwere omume ndọghachi azụ. Onye na-ere igwe ojii na Ngwuputa contracts nwere ike ịbụ adịghị mma; a na saịtị na-enye ụdị ozi a nwere ike na-enweghị ka hacking ọgụ; ọrụ apụghị ịchịkwa ọrụ ego ha na-enweta maka Ngwuputa; Ọzọkwa, mberede weere pụrụ ịmanye data center na-akwụ obere ka ya ọrụ n'okpuru ndị na-esonụ contracts.
Ugbu, enweghị iwu na-achịkwa Ngwuputa ọrụ Russia na mba ndị ọzọ ma. The Russian President iwu, Otú ọ dị, kwuru na Government na Central Bank ga-iru ụtụ isi na ndebanye aha na iji maka na Ngwuputa ụlọ ọrụ na-esote okpomọkụ. Nke a ụzọ ga e weere na-akpọ ma na ụlọ ọrụ na onwe miners.
na December, na Commissioner n'okpuru President nke Russian Federation na nchebe nke ikike nke oru buu igba n'ulo, Boris Titov, chọrọ ịme a tax na kaadị Ngwuputa na ọnụego nke 14%.
Regulation nke kaadị Market na ...
Ọkachamara kweere na na 2018, ...
Olee otú ime ka ego na ọdịda ...
Ọnụ na ahia anyị un ...
IP ndepụta maka cloaking on Facebo ...
Ònye maara otú e si eme cloaking, ...
Chọpụta ihe ga-eme tomo ...
Họrọ otu n'ime foto, cl ...
Oyi obere akpa kaadị - CoolWalle ...
The Importance of Ịmara abou ...